ဘယ် အသက်အရွယ် မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် သင့်လဲဆိုတာကို မိန်းကလေးတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်…. - ZeeKwat
ခရမ်းသီးရဲ့ အကျိုးအာနိသင်(၃)မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…..
အိပ်နေစဉ်ဟောက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန်အချက်များကို လူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်….
အိမ်ရှင်မတွေချက်ဖို့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဗမာဟင်း တွဲများလေ့လာမိတာလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်….
ကျန်းမာရေးအယူအဆအလွဲများ သံပရာ သီးကို မျက်နှာမှာပွတ်လိမ်းတာဘယ်လို အကျိုးများရှိသလဲဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
Home » Gallery » Health » ဘယ် အသက်အရွယ် မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် သင့်လဲဆိုတာကို မိန်းကလေးတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်….
ဘယ် အသက်အရွယ် မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် သင့်လဲဆိုတာကို မိန်းကလေးတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်….
ကိုယ်ဝန်ဆောင် တွေမှာ အသက်အရ မတူတာ တွေရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ရရင် ကိုယ်ခန္ဓာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု နဲ့ သတိထားစရာတွေ မတူကြပါ။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအသက်အရွယ်ကို အတိအကျမပြောနိုင်ပါတဲ့။ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ချင့်ချိန်စရာတွေရှိတယ်။ ယေဘုယျ အသက် ၂ဝ မှာ အားအင်အပြည့်ဆုံးဖြစ် တယ်။ ကိုယ်၊ စိတ်၊ ဝင်ငွေ ၃ဝနဲ့ ၄ဝ ဆိုရင် ငွေကြေးပိုပြည့်စုံနေမယ်။ ဘဝအတွေ့ အကြုံတွေ ကုံလုံနေမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ရတဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးက ပိုခက်ခဲလာ နိုင်တယ်။ မွေးပြီး ကလေးကိုစောင့်ရှောက် ရတာလည်း ငယ်တုန်းကလောက် မလွယ် တတ်ပါ။
အသက် ၂ဝ ကနေ ၂၄ နှစ်ကြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
မျိုးပွားဖို့ အကောင်းဆုံးအ သက်တွေဖြစ်တယ်။ ရာသီလည်း မှန်နေတယ်။ မျိုးထွက်လည်း မှန်နေမယ်။ ရချင် တိုင်းတော့ ရချင်မှသာရမယ်။ တားဆေး-တားနည်းမသုံးသူတွေ တစ်လမှာ ကိုယ်ဝန် ရလမ်း ရာခိုင်နှုန်း ၂ဝ စီရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန် ရလာရင် သွေးတိုးဖြစ်တာ အနည်းဆုံး ကာလဖြစ်တယ်။ ၂၅ နှစ်အောက် ဆိုရင် ၄ဝ တွေထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆီးချိုဖြစ်စရာ ရာခိုင်နှုန်း ၅ဝ နည်းတယ်။ စိတ်ပိုင်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြပါ။ တချို့ ကိုယ်ခန္ဓာ အလှပျက် မှာ ကို ပိုစိုးရိမ်တယ်။ တချို့က မျိုးဆက်ပွားဖို့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကို အရအမိ ယူချင်မယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်နှုန်း ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတယ်။ အသက် ၂ဝ ဝန်း ကျင် မိခင်လောင်း ကနေ ဒေါင်းဆင်ဒရုမ်းနဲ့ ကလေးမွေးဖို့အခွင့်အလမ်း ၁၆၆၇ ယောက် မှာ တစ်ယောက်သာရှိတယ်။ တခြား မွေးရာ ပါချို့ယွင်းချက်နဲ့ ကလေး မွေးနှုန်း ၅၂၆ ယောက်မှာ တစ်ယောက်သာရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုချို့ယွင်းချက်နဲ့ ကလေး တွေဟာ မိခင်လောင်း အသက် ၂ဝ ကျော် တွေကနေ ကလေးမွေးတာ များတယ်။ အဲဒါကတော့ ဒီအသက်မှာ ကလေးအမွေး များကြလို့လည်းဖြစ်တယ်။
အသက်၂၅ နှစ်နဲ့ ၂၉ နှစ်ကြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင် နေစဉ် လေ့ကျင့်ခန်း လည်းလုပ်ရင် မွေးဖွားရတာ ပိုလွယ်ကူမယ်။ မွေးပြီးနောက် ကိုယ်အနေအထားရင်းစားပြန်ရတာ ပိုမြန်မယ်။ မွေးရတာနဲ့ မွေးပြီးအပြောင်းအလဲတွေအတွက် အသင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက် ၃ဝ အောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ရင်သားကင်ဆာနဲ့ မျိုးဥအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ လည်း အနည်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်။ စိတ်ပိုင်းမှာလည်း ရင့်ကျက်လာပြီ။ အလုပ်အကိုင်နေသားကျပြီ။ အိမ်ထောင်ရေး တည်ငြိမ်လာပြီ။ ကိုယ်ဝန်ပျက်နှုန်း ၁ဝ ရာခိုင် နှုန်းရှိမယ်။ ဒေါင်းဆင်ဒရုမ်းနဲ့ ကလေး မွေးလမ်း ၁၂၅ဝ မှာ တစ်ယောက်ရှိမယ်။ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်နဲ့ ကလေး မွေးလမ်း ၄၇၆ ယောက်မှာ တစ်ယောက်။
အသက် ၃ဝ ကနေ ၃၄ နှစ်ကြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
မျိုးပွားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်း အသက် ၃ဝ နောက်မှာ ကျဆင်းလာပြီ။ အထောက်အကူနည်းနဲ့ ကလေးရအောင် လုပ်ရင်တော့ ကိုယ့်ထက်အသက်ပိုကြီးသူ တွေထက် အခွင့်အလမ်းသာတယ်။ှုင်္ဠ နည်းလုပ်ရင် အောင်မြင်နှုန်း ၂၅ ရာခိုင် နှုန်းကနေ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ အသက် ၄ဝ ကျော်လာရင် ခြောက်ရာခိုင်နှုန်းကနေ ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းသာရှိမယ်။ ဗိုက်ခွဲမွေးရတာ မှာ အသက် ၃ဝ-၃၄ နှစ် ကိုယ်ဝန်ဆောင် တွေက အသက် ၂ဝ ကျော်တွေထက် နှစ်ဆ ပိုများတယ်။ စိတ်ရော အလုပ်အကိုင်ပါ ပိုပြီးတည်ငြိမ်နေပြီ။ ကိုယ်ဝန်ပျက်နှုန်း ၁၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်။ ဒေါင်းဆင် ဒရုမ်းကလေးမွေးလမ်း ၉၅၂ ယောက်မှာ တစ်ယောက်ရှိမယ်။ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက် နဲ့ကလေး ၃၈၅ ယောက်မှာ တစ်ယောက် ရှိမယ်။
အသက် ၃၅ နှစ်ကနေ ၃၉ နှစ်ကြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
မျိုးပွားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်း ဆက်ကျဆင်းလာပြီ။ ၃၈ နှစ်ဆိုရင် နည်း သထက်နည်းပြီ။ သွေးတိုးနိုင်ခြေ အသက် ၃၅ နှစ်အောက်ကထက် နှစ်ဆပိုလာပြီ။ ၁ဝ-၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကိုယ်ဝန်သွေးတိုးရှိ နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆီးချိုဖြစ်တာလည်း သုံးဆပိုလာပြီ။ ကိုယ်အလေးချိန် ပိုတက် မယ်။ ဗိုက်ခွဲမွေးဖို့လည်း ၃၅ နှစ်အောက် တွေထက် နှစ်ဆပိုလာမယ်။ မူမမှန်ကလေး မွေးမလားသိအောင် Amniocentesis ရေမြွှာရည်ဖောက်စစ်တာနဲ့ Prenatal Screening တခြားနည်းတွေ လိုအပ်လာပြီ။ ကလေးအမြွှာရလမ်း ပိုလာပြီ။ ကိုယ်ဝန် ပျက်နှုန်း ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိမယ်။ အသေ မွေးနှုန်း ငယ်သူတွေထက် နှစ်ဆပိုမယ်။
အသက် ၄ဝ ကနေ ၄၅ နှစ်ကြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
ကောင်းတာကို အရင်ပြောရ ရင် အသက် ၄ဝ ကျော်အမျိုးသမီးတွေကို မျိုးပွားအထောက်အကူနည်းတွေမပါဘဲ မွေးနိုင်ကြပြီး အသက်လည်း ရှည်တယ် လို့ မကြာသေးခင်က လေ့လာမှုတစ်ခုက ဆိုပါတယ်။
ကိုယ်ခံကျန်းမာရေး၊ လူနေမှု ပုံစံ စတာတွေအပေါ်မှာတော့ မူတည် နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိပ်ခေါင်းပိုဖြစ်မယ်။ ဆီးအိမ်ကို ဖိအားသက်ရောက်တာ ပိုဖြစ်မယ်။ သားအိမ်နဲ့ ဆီးအိမ်ကျတာ ပိုများတယ်။ ရင်သားတွဲကျတာပိုမယ်။ ကိုယ် လက်လေ့ကျင့်ခန်းအပြင် (ကီဂယ်လ်)လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ စိတ်ပိုင်းမှာတော့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပိုရှိနေသူဖြစ်ပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်လမ်း သုံးပုံ တစ်ပုံရှိတယ်။ အချင်း အောက်ကျတာ ပိုမယ်။ ခွဲမွေးရတာ ပိုများမယ်။ ကလေးအရွယ်အစား သေးနိုင်တယ်။ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်နဲ့ကလေး အသက် ရလေ နည်းနည်းချင်း ပိုလာလေ။ ၆၆ ယောက်မှာ တစ်ယောက်ရှိမယ်။ ဒေါင်း ဆင်ဒရုမ်းကလေး ၁ဝ၆ ယောက်မှာ တစ် ယောက်ရှိမယ်။ အသက် ၄၄ နှစ်ကျော်လာ ရင် ဒေါင်းဆင်ဒရုမ်းကလေး ၃၈ ယောက် မှာ တစ်ယောက်နဲ့ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက် နဲ့ ကလေး ၂၆ ယောက်မှာ တစ်ယောက် ရှိမယ်။
အသက် ၄၅နှစ်ကနေ ၄၉နှစ်ကြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
ကလေးရနိုင်ခြေ သုည ဒသမ ဝ၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ အထောက်အကူ နည်းတွေသုံးလည်း အခွင့်အလမ်းနည်း လာပြီ။ ကိုယ်ဝန်ရလာရင် စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ရမယ်။ ကိုယ်ဝန်နဲ့ အထဲက ကလေး ကျန်းမာရေးသာမက ကိုယ့်ကျန်းမာရေး ကိုပါ သတိထားရမယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်လမ်း ရာခိုင်နှုန်း ၅ဝ ရှိတယ်။ ကလေးအသေမွေး မှာ အသက် ၂ဝ ကျော်ကိုယ်ဝန်တွေထက် နှစ်ဆပိုတယ်။ ဒေါင်းဆင်ဒရုမ်းကလေး ၃ဝ မှာ တစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ မွေးရာပါချို့ ယွင်းချက်နဲ့ ကလေးရလမ်း ၂၁ ယောက် မှာ တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ၄၉ ကျော်ရင် ဒေါင်းဆင်ဒရုမ်းကလေး ၁၁ ယောက်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်နဲ့ ကလေးရလမ်း ရှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက် ရှိပြီ။
အသက် ၅ဝ ကျော်ကိုယ်ဝန်
အမျိုးသမီး အများစုဟာ အသက် ၄၅ နှစ်နဲ့ ၅၅ နှစ်ကြား၊ ၅၁ နှစ်မှာ သွေးဆုံးကြတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရချင်သူ အထောက်အကူတွေ ပိုလိုလာပြီ။ ဆေး၊ ပရိုဂျက်စတီ ရုန်းဟော်မုန်းက ကိုယ်ဝန်ကို အနည်းဆုံး နှစ်လအထိ ထိန်းထားနိုင်အောင်လိုမယ်။ တချို့က မျိုးဥအလှူ လိုမယ်။ သွေးတိုး၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ အချင်းပြဿနာတွေကို သတိထားရမယ်။ မွေးပြီးနောက်လည်း သတိထားစရာတွေပိုမယ်။
ဆေးသုတေသနအရ ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စ အဲဒါတွေ နဲ့ မတူတာထောက်ပြပြီး ဆေးပညာမှားတယ်တော့ လာမပြောကြပါနဲ့။ အရင်စာ တွေမှာ လာလာပြောကြတယ်။
ကိုယဝြနဆြောငြ တှမှော အသကအြရ မတူတာ တှရှေိတယြ။ ကိုယဝြနဆြောငြ ရရငြ ကိုယခြနျဓာ၊ စိတလြှုပရြှားမှု နဲ့ သတိထားစရာတှေ မတူကှပါ။ ကိုယဝြနြ ဆောငဖြို့ အကောငြးဆုံးအသကအြရှယကြို အတိအကမွပှောနိုငပြါတဲ့။ အကောငြးနဲ့ အဆိုး ခငွ့ခြွိနစြရာတှရှေိတယြ။ ယဘေုယွ အသကြ ၂ဝ မှာ အားအငအြပှညြ့ဆုံးဖှစြ တယြ။ ကိုယြ၊ စိတြ၊ ဝငငြှေ ၃ဝနဲ့ ၄ဝ ဆိုရငြ ငှကှေေးပိုပှညြ့စုံနမယြေ။ ဘဝအတှေ့ အကှုံတှေ ကုံလုံနမယြေ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယဝြနဆြောငြ ရတဲ့ ဝနထြုပဝြနပြိုးက ပိုခကခြဲလာ နိုငတြယြ။ မှေးပှီး ကလေးကိုစောငြ့ရှောကြ ရတာလညြး ငယတြုနြးကလောကြ မလှယြ တတပြါ။
အသကြ ၂ဝ ကနေ ၂၄ နှစကြှား ကိုယဝြနဆြောငခြှငြး
မွိုးပှားဖို့ အကောငြးဆုံးအ သကတြှဖှစေတြယြ။ ရာသီလညြး မှနနြတယြေ။ မွိုးထှကလြညြး မှနနြမယြေ။ ရခငြွ တိုငြးတော့ ရခငွမြှသာရမယြ။ တားဆေး-တားနညြးမသုံးသူတှေ တစလြမှာ ကိုယဝြနြ ရလမြး ရာခိုငနြှုနြး ၂ဝ စီရှိတယြ။ ကိုယဝြနြ ရလာရငြ သှေးတိုးဖှစတြာ အနညြးဆုံး ကာလဖှစတြယြ။ ၂၅ နှစအြောကြ ဆိုရငြ ၄ဝ တှထကြေ ကိုယဝြနဆြောငြ ဆီးခွိုဖှစစြရာ ရာခိုငနြှုနြး ၅ဝ နညြးတယြ။ စိတပြိုငြးက တစယြောကနြဲ့တစယြောကြ မတူကှပါ။ တခွို့ ကိုယခြနျဓာ အလှပကြွ မှာ ကို ပိုစိုးရိမတြယြ။ တခွို့က မွိုးဆကပြှားဖို့ အကောငြးဆုံးအခှငြ့အလမြးကို အရအမိ ယူခငွမြယြ။ ကိုယဝြနပြကွနြှုနြး ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုငနြှုနြးသာရှိတယြ။ အသကြ ၂ဝ ဝနြး ကငြွ မိခငလြောငြး ကနေ ဒေါငြးဆငဒြရုမြးနဲ့ ကလေးမှေးဖို့အခှငြ့အလမြး ၁၆၆၇ ယောကြ မှာ တစယြောကသြာရှိတယြ။ တခှား မှေးရာ ပါခွို့ယှငြးခကွနြဲ့ ကလေး မှေးနှုနြး ၅၂၆ ယောကမြှာ တစယြောကသြာရှိတယြ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီလိုခွို့ယှငြးခကွနြဲ့ ကလေး တှဟော မိခငလြောငြး အသကြ ၂ဝ ကွြော တှကနေေ ကလေးမှေးတာ မွားတယြ။ အဲဒါကတော့ ဒီအသကမြှာ ကလေးအမှေး မွားကှလို့လညြးဖှစတြယြ။
အသကြ၂၅ နှစနြဲ့ ၂၉ နှစကြှား ကိုယဝြနဆြောငခြှငြး
ကိုယဝြနဆြောငြ နစဉြေ လကေ့ငွ့ခြနြး လညြးလုပရြငြ မှေးဖှားရတာ ပိုလှယကြူမယြ။ မှေးပှီးနောကြ ကိုယအြနအထေားရငြးစားပှနရြတာ ပိုမှနမြယြ။ မှေးရတာနဲ့ မှေးပှီးအပှောငြးအလဲတှအတှေကြ အသငြ့ဆုံးအခွိနဖြှစနြိုငတြယြ။ အသကြ ၃ဝ အောကြ ကိုယဝြနဆြောငရြငြ ရငသြားကငဆြာနဲ့ မွိုးဥအိမကြငဆြာဖှစနြိုငခြှေ လညြး အနညြးဆုံးကာလဖှစတြယြ။ စိတပြိုငြးမှာလညြး ရငြ့ကကွလြာပှီ။ အလုပအြကိုငနြသေားကပွှီ။ အိမထြောငရြေး တညငြှိမလြာပှီ။ ကိုယဝြနပြကွနြှုနြး ၁ဝ ရာခိုငြ နှုနြးရှိမယြ။ ဒေါငြးဆငဒြရုမြးနဲ့ ကလေး မှေးလမြး ၁၂၅ဝ မှာ တစယြောကရြှိမယြ။ မှေးရာပါခွို့ယှငြးခကွနြဲ့ ကလေး မှေးလမြး ၄၇၆ ယောကမြှာ တစယြောကြ။
အသကြ ၃ဝ ကနေ ၃၄ နှစကြှား ကိုယဝြနဆြောငခြှငြး
မွိုးပှားနိုငတြဲ့အခှငြ့အလမြး အသကြ ၃ဝ နောကမြှာ ကဆွငြးလာပှီ။ အထောကအြကူနညြးနဲ့ ကလေးရအောငြ လုပရြငတြော့ ကိုယြ့ထကအြသကပြိုကှီးသူ တှထကြေ အခှငြ့အလမြးသာတယြ။ှုငျြဠ နညြးလုပရြငြ အောငမြှငနြှုနြး ၂၅ ရာခိုငြ နှုနြးကနေ ၂၈ ရာခိုငနြှုနြးရှိတယြ။ အသကြ ၄ဝ ကွောလြာရငြ ခှောကရြာခိုငနြှုနြးကနေ ရှစရြာခိုငနြှုနြးသာရှိမယြ။ ဗိုကခြှဲမှေးရတာ မှာ အသကြ ၃ဝ-၃၄ နှစြ ကိုယဝြနဆြောငြ တှကေ အသကြ ၂ဝ ကွောတြှထကြေ နှစဆြ ပိုမွားတယြ။ စိတရြော အလုပအြကိုငပြါ ပိုပှီးတညငြှိမနြပှေီ။ ကိုယဝြနပြကွနြှုနြး ၁၁ ဒသမ ၇ ရာခိုငနြှုနြးရှိမယြ။ ဒေါငြးဆငြ ဒရုမြးကလေးမှေးလမြး ၉၅၂ ယောကမြှာ တစယြောကရြှိမယြ။ မှေးရာပါခွို့ယှငြးခကြွ နဲ့ကလေး ၃၈၅ ယောကမြှာ တစယြောကြ ရှိမယြ။
အသကြ ၃၅ နှစကြနေ ၃၉ နှစကြှား ကိုယဝြနဆြောငခြှငြး
မွိုးပှားနိုငတြဲ့အခှငြ့အလမြး ဆကကြဆွငြးလာပှီ။ ၃၈ နှစဆြိုရငြ နညြး သထကနြညြးပှီ။ သှေးတိုးနိုငခြှေ အသကြ ၃၅ နှစအြောကကြထကြ နှစဆြပိုလာပှီ။ ၁ဝ-၂ဝ ရာခိုငနြှုနြး ကိုယဝြနသြှေးတိုးရှိ နိုငတြယြ။ ကိုယဝြနဆြီးခွိုဖှစတြာလညြး သုံးဆပိုလာပှီ။ ကိုယအြလေးခွိနြ ပိုတကြ မယြ။ ဗိုကခြှဲမှေးဖို့လညြး ၃၅ နှစအြောကြ တှထကြေ နှစဆြပိုလာမယြ။ မူမမှနကြလေး မှေးမလားသိအောငြ Amniocentesis ရမှောရညဖြောကစြစတြာနဲ့ Prenatal Screening တခှားနညြးတှေ လိုအပလြာပှီ။ ကလေးအမှာရလမြး ပိုလာပှီ။ ကိုယဝြနြ ပကွနြှုနြး ၁၈ ရာခိုငနြှုနြးနီးပါးရှိမယြ။ အသေ မှေးနှုနြး ငယသြူတှထကြေ နှစဆြပိုမယြ။
အသကြ ၄ဝ ကနေ ၄၅ နှစကြှား ကိုယဝြနဆြောငခြှငြး
ကောငြးတာကို အရငပြှောရ ရငြ အသကြ ၄ဝ ကွောအြမွိုးသမီးတှကေို မွိုးပှားအထောကအြကူနညြးတှမပေါဘဲ မှေးနိုငကြှပှီး အသကလြညြး ရှညတြယြ လို့ မကှာသေးခငကြ လလေ့ာမှုတစခြုက ဆိုပါတယြ။
ကိုယခြံကနြွးမာရေး၊ လူနမှေု ပုံစံ စတာတှအပေေါမြှာတော့ မူတညြ နတယြေ။ ဒါပမေဲ့ လိပခြေါငြးပိုဖှစမြယြ။ ဆီးအိမကြို ဖိအားသကရြောကတြာ ပိုဖှစမြယြ။ သားအိမနြဲ့ ဆီးအိမကြတွာ ပိုမွားတယြ။ ရငသြားတှဲကတွာပိုမယြ။ ကိုယြ လကလြကေ့ငွ့ခြနြးအပှငြ (ကီဂယလြ)လကေ့ငွ့ခြနြး လုပပြါ။ စိတပြိုငြးမှာတော့ ပိုငပြိုငနြိုငနြိုငြ ပိုရှိနသေူဖှစပြါမယြ။ ကိုယဝြနပြကွလြမြး သုံးပုံ တစပြုံရှိတယြ။ အခငြွး အောကကြတွာ ပိုမယြ။ ခှဲမှေးရတာ ပိုမွားမယြ။ ကလေးအရှယအြစား သေးနိုငတြယြ။ မှေးရာပါခွို့ယှငြးခကွနြဲ့ကလေး အသကြ ရလေ နညြးနညြးခငြွး ပိုလာလေ။ ၆၆ ယောကမြှာ တစယြောကရြှိမယြ။ ဒေါငြး ဆငဒြရုမြးကလေး ၁ဝ၆ ယောကမြှာ တစြ ယောကရြှိမယြ။ အသကြ ၄၄ နှစကြွောလြာ ရငြ ဒေါငြးဆငဒြရုမြးကလေး ၃၈ ယောကြ မှာ တစယြောကနြဲ့ မှေးရာပါခွို့ယှငြးခကြွ နဲ့ ကလေး ၂၆ ယောကမြှာ တစယြောကြ ရှိမယြ။
အသကြ ၄၅နှစကြနေ ၄၉နှစကြှား ကိုယဝြနဆြောငခြှငြး
ကလေးရနိုငခြှေ သုည ဒသမ ဝ၃ ရာခိုငနြှုနြးရှိတယြ။ အထောကအြကူ နညြးတှသေုံးလညြး အခှငြ့အလမြးနညြး လာပှီ။ ကိုယဝြနရြလာရငြ စမြးသပမြှုတှေ လုပရြမယြ။ ကိုယဝြနနြဲ့ အထဲက ကလေး ကနြွးမာရေးသာမက ကိုယြ့ကနြွးမာရေး ကိုပါ သတိထားရမယြ။ ကိုယဝြနပြကွလြမြး ရာခိုငနြှုနြး ၅ဝ ရှိတယြ။ ကလေးအသမှေေး မှာ အသကြ ၂ဝ ကွောကြိုယဝြနတြှထကြေ နှစဆြပိုတယြ။ ဒေါငြးဆငဒြရုမြးကလေး ၃ဝ မှာ တစယြောကနြှုနြးနဲ့ မှေးရာပါခွို့ ယှငြးခကွနြဲ့ ကလေးရလမြး ၂၁ ယောကြ မှာ တစယြောကရြှိတယြ။ ၄၉ ကွောရြငြ ဒေါငြးဆငဒြရုမြးကလေး ၁၁ ယောကမြှာ တစယြောကနြဲ့ မှေးရာပါခွို့ယှငြးခကွနြဲ့ ကလေးရလမြး ရှစယြောကမြှာ တစယြောကြ ရှိပှီ။
အသကြ ၅ဝ ကွောကြိုယဝြနြ
အမွိုးသမီး အမွားစုဟာ အသကြ ၄၅ နှစနြဲ့ ၅၅ နှစကြှား၊ ၅၁ နှစမြှာ သှေးဆုံးကှတယြ။ ကိုယဝြနရြခငွသြူ အထောကအြကူတှေ ပိုလိုလာပှီ။ ဆေး၊ ပရိုဂကွစြတီ ရုနြးဟောမြုနြးက ကိုယဝြနကြို အနညြးဆုံး နှစလြအထိ ထိနြးထားနိုငအြောငလြိုမယြ။ တခွို့က မွိုးဥအလှူ လိုမယြ။ သှေးတိုး၊ ကွောကကြပနြဲ့ အခငြွးပှဿနာတှကေို သတိထားရမယြ။ မှေးပှီးနောကလြညြး သတိထားစရာတှပေိုမယြ။
ဆေးသုတသနေအရ ရေးတာဖှစပြါတယြ။ တစယြောကစြ၊ နှစယြောကစြ အဲဒါတှေ နဲ့ မတူတာထောကပြှပှီး ဆေးပညာမှားတယတြော့ လာမပှောကှပါနဲ့။ အရငစြာ တှမှော လာလာပှောကှတယြ။
Zeekwat Lucky Draw
၁၆ ပဲရည် ၁၀၅၄၅၀၀ ၁၀၅၃၀၀၀
၁၅ ပဲရည် ၉၉၁၁၀၀ ၉၉၁၁၀၀
အခြေအနေ အရောင်းသင့်/ အဝယ်သင့် အရောင်းသင့်/ အဝယ်သင့်
အောင်သမာဓိ စိန်ရွှေရတနာဆိုင်နှင့် ရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းမှ ပံ့ပိုးသည်။
12:00 AM MMK MMK
Moe Yan Money Exchange မှ ကူညီပံ့ပိုးသည်။
YANGON 985 995 825 910
BAGO 1000 1010 855 925
NAYPYITAW 1020 1040 875 950
MANDALAY 1005 1015 880 970
MEIKHTILA 1015 1040 870 945
AYAWADDY 1020 1030 875 1020
MON 1025 1035 870 950
SAGAING 1020 1035 890 -
Max Energy မှ ကူညီပံ့ပိုးသည်။
ရွှေလမင်း ပဲခွဲစက် မှ ကူညီပံ့ပိုးသည်။
No.177, Strand Road, Near Thit Taw Road Bus Stop, Ahlone Township, Yangon, Myanmar
+95 9777788389, 09777788489
© All right reserved - ZeeKwat Technology Co.,Ltd